बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि अर्थमन्त्रीले अाज जवाफ दिने
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आ.व. २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सदस्यहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिने तयारी गरेका छन् ।
बिहीबारदेखि राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएकामा आज छलफल सकिएलगत्तै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूचिमा उल्लेख रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबारको छलफलमा २२ जना सदस्यले भाग लिएका थिए ।